by कालिका टाईम्स ३१ असार २०७७ १३:४६ 15 July 2020 0102
सुशान्त सिंह राजपूतको निधन भएको आज ठ्याक्कै एक महिना भयो । १४ जूनमा सुशान्त सिंह आफ्नो बान्द्रास्थित घरमा मृत पाइएका थिए । प्रहरीले सुशान्तले आत्महत्या गरेको बताएका थिए ।
सुशान्तको मृत्यु भएको महिना दिन पूरा हुँदा उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीले इन्स्टाग्राममा एउटा फोटो पोस्ट गरेकी छिन् जुन सोसल मिडियामा चर्चाको विषय बनेको छ । साथै रियाले एउटा नोट पनि लेखेकी छिन् ।
रियाले लेखेकी छिन्, ‘अहिलेसम्म आफ्नो भावनामाथि नियन्त्रण पाउनका लागि जुधिरहेकी छु । आफैंसँग लडिरहेकी छु । मेरो मुटुमा एउटा शून्यता छाएको छ । तिमी ती व्यक्ति हौ जसले मलाई प्रेममा र प्रेमको शक्तिमाथि विश्वास गर्न सिकायौ । तिमीले गणितको एउटा सानो फर्मूलाले जीवन बुझ्न कति मद्दत गर्छ भनेर सिकाएको छ । मैले तिमीबाट हरेक दिन सिकेकी छु । तिमी अब छैनौ भनेर मेरो मनले यो कुरा कहिल्यै स्विकार गर्न सक्दैनँ । मलाई थाहा छ तिमी अब आनन्दको जीवन बाँचिरहेको छौ ।’
रियाले लेखिन्, ‘चन्द्रमा, तारा, आकाशगंगाले ‘यो वैज्ञानिक’ लाई हात फैलाएर स्वागत गरिरहेका होलान् ।’
‘अब तिमीले पनि ती चम्किलो तारामध्ये एक हौ । मेरो ‘सुटिङ स्टार’ मा तिम्रो प्रतिक्षा गर्नेछु र तिमी फिर्ता होउ भनेर माग्नेछु । म सुन्दर व्यक्ति जस्तो हुनसक्छन् तिमी ठ्याक्कै त्यस्तै थियौ । एक उत्कृष्ट व्यक्ति जसलाई संसारले देखे ।’
अंकितको पनि पोस्टः
उता सुशान्तकी पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडेले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा पोस्ट गरेकी छिन् । यसअघि सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युपछि अंकिता लोखंडेले इन्स्टाग्राममा एउटा पनि पोस्ट गरेकी थिइनन् ।
अंकिता लोखंडेले एउटा तस्बिरले पोस्ट गरेकी छिन् जसमा पूजा कोठाा एउटा बत्ती बलिरहेको देखिएको छ । यससँगै सेतो फूल पनि चढाइएको छ । अंकिताले यो पोस्टमा तीन शब्द मात्रै लेखेकी छिन् – भगवानको सन्तान । ’
SQL requests:140. Generation time:0.952 sec. Memory consumption:13.92 mb